အဖေ့ခြေရာကို လိုက်နင်းကြမယ့် ဘောလုံးလောကရဲ့ မျိုးဆက်သစ်လေးများ
30 Aug 2018 . 4:34 PM
ဘောလုံးလောကမှာ အဖေရော၊ သားရော အောင်မြင်မှု ရယူနိုင်တဲ့သူတွေက ခပ်ရှားရှား။ အဖေက ဂန္ထ၀င်အမည်ပေါက်ပေမယ့် သားက မထင်မရှားဘ၀နဲ့ အဆုံးသတ်ခဲ့ရတာမျိုး။ ဥပမာ နယ်သာန်လန် ဂန္ထ၀င် ယိုဟန်ခရိုက်ဖ် Johan Cruyff ဆိုရင် ဘောလုံးလောကမှာ မသိသူ မရှိသလောက်ပဲ။ ဒါပေမဲ့ သူ့ရဲ့သားဖြစ်တဲ့ ယော်ဒီခရိုက်ဖ် Jordi Cruyff ကတော့ လူသိနည်းခဲ့တယ်။ အဖေရော သားရော အောင်မြင်ခဲ့တာဆိုလို့ မာဒလ်ဒီနီ Maldini တို့ သားအဖ၊ ရှမိုက်ကယ် Schmeichel တို့ သားအဖတို့ လောက်သာရှိပြီး သူတို့လောက် အောင်မြင်မှုမရှိပေမယ့် ထိုက်သင့်တဲ့နေရာတစ်ခုရခဲ့တာက ဘလင်း Blind သားအဖ ၊ ရက်နက်ပ် Redknapp တို့ သားအဖတို့ပါပဲ။
ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတုန်းက ပေါ်တူဂီနာမည်ကျော် ကစားသမား စီရော်နယ်လ်ဒို Cristiano Ronaldo ရဲ့ သားဖြစ်သူ စီရော်နယ်လ်ဒိုဂျူနီယာဟာ ဂျူဗင်တပ်စ် ယူ-၉အသင်းနဲ့ ပူးပေါင်းခဲ့ပြီး သူဟာ စီရော်နယ်လ်ဒိုရဲ့ မျှော်လင့်ချက် အနာဂတ်ပါပဲ။ အခုဆိုရင် ဂန္ထ၀င်တွေရဲ့ မျိုးဆက်သစ်တွေက ဘောလုံးလောကမှာ နေရာယူလာကြပြီ။ သူတို့တွေကရော သူတို့ဖခင်ရဲ့ ခြေရာကို လိုက်နင်းနိုင်ကြမှာလား။ ဒါကြောင့် အဖေ့ခြေရာကို လိုက်နင်းကြမယ့် ဘောလုံးလောကရဲ့ မျိုးဆက်သစ်လေးတွေကို ပရိသတ်တွေ ဗဟုသတရအောင် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် . . .
တီမိုသီဝီယာ Timothy Weah
လိုင်ဘေးရီးယား ဂန္ထ၀င်ကစားသမားကြီး ဂျော့ခ်ျဝီယာ George Weah က ၁၉၉၀ ကျော် ကာလတွေမှာ ပရိသတ်တွေရဲ့ အသည်းနှလုံးဖြစ်ခဲ့သူ။ အခု လိုင်ဘေးရီးယား သမ္မတဖြစ်နေတဲ့ ဂျော့ခ်ျဝီယာရဲ့ သားဖြစ်သူ တီမိုသီဝီယာကလည်း အဖေ့ခြေရာနင်းနိုင်မယ့် သားဖြစ်အောင် ကြိုးစားနေပြီ။ အဖေဖြစ်သူရဲ့ နိုင်ငံကို မခံယူဘဲ အမေရိကန်နိုင်ငံသား ခံယူထားတဲ့ တီမိုသီဟာ သူ့ဖခင်ဖြစ်သူအတွက် တစ်ချိန်က အောင်မြင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ PSG အသင်းမှာ ကစားနေပြီ။ အသက်(၁၈)နှစ်သာရှိသေးတဲ့ တီမိုသီက ဂျော့ခ်ျဝီယာ ကိုယ်ပွားလို့ တင်စားရမှာဖြစ်ပြီး သူ့ဖခင်လိုပဲ ဘောလုံး Skill ကောင်းမွန်တဲ့သူပါ။ ဂျော့ခ်ျဝီယာလို ကမ္ဘာ့အဆင့်ကို ရောက်ရှိဖို့ ခြေလှမ်းပြင်နေတဲ့ တီမိုသီ သူ့ရဲ့အိပ်မက်တွေကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မလားဆိုတာ အချိန်က အဆုံးအဖြတ်ပေးသွားပါလိမ့်မယ်။
ဂျက်စတင်ကလွိုက်ဗတ် Justin Kluivert
ပတ်ထရက်ကလွိုက်ဗတ် Patrick Kluivert ဆိုတာက တစ်ခေတ်တစ်ခါက ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး တိုက်စစ်မှူးစာရင်းဝင် ကစားသမားတစ်ဦး။ ဥရောပဘောလုံးလောကကို စိုးမိုးထားနိုင်ခဲ့သူ။ အခု သူ့ရဲ့သားဖြစ်တဲ့ ဂျက်စတင်ကလွိုက်ဗတ်ကလည်း ဖခင်ဖြစ်သူရဲ့ အောင်မြင်မှုကို ပြန်လည်ရယူဖို့အတွက် ရှေ့ဆက်ချီတက်နေပြီ။ ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီက အေဂျက်စ်အသင်းနဲ့အတူ ခြေစွမ်းပြခဲ့တဲ့ ဂျက်စတင်ကို ရိုးမားအသင်းက တခြား ထိပ်သီးအသင်းတွေထက် လက်ဦးမှုရယူပြီး ခေါ်ယူခဲ့တယ်။ ဂျက်စတင်ရဲ့ အသက်က အခုမှ (၁၉)နှစ်သာရှိသေးလို့ သင်ယူစရာတွေ၊ စိန်ခေါ်မှုတွေကတော့ အများကြီးရှိနေဆဲပဲ။ ဒါပေမဲ့ ကလွိုက်ဗတ်ရဲ့ သွေးတွေ စီးဆင်းနေပြီး အခြေခံပါရမီ ကောင်းတဲ့ ဂျက်စတင် စိန်ခေါ်မှုတွေကို အကောင်းဆုံးရင်ဆိုင်နိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်တယ်။ တစ်ချိန်ကျရင် ပက်ထရစ်ကလွိုက်ဗတ်လို ကမ္ဘာ့အဆင့် ကစားသမား ဖြစ်လာမယ့်သူဆိုတာ အသေအချာပဲ။
အန်ဇိုဇီဒန်း Enzo Zidane
တစ်ချိန်က ဘောလုံးလောကမှာ “ဇီဇူး”ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ ထင်ရှားခဲ့သူ ပြင်သစ်ဂန္ထ၀င် ကစားသမားကြီး ဇီဒန်း Zidane ရဲ့ သားအကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ဖခင်ဖြစ်သူ အောင်မြင်မှုတွေ ရယူခဲ့တဲ့ ရီးယဲလ်လူငယ်အသင်းမှာ ကျင်လည်ခဲ့ပြီး အဲဒီကာလတွေတုန်းက ဖခင်နဲ့အတူ လက်တွဲခဲ့ဖူးတယ်။ ဒါပေမဲ့ စီနီယာအသင်းမှာ ကမ္ဘာ့အဆင့်ကစားသမားတွေ များနေတာကြောင့် သူ့ ဘ၀တက်လမ်းအတွက် ၂၀၁၇ ခုနှစ်တုန်းက အလာဗတ်စ်ကို ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီး အဲဒီကနေ ဆွစ်ဇာလန်ကလပ် Lausanne-Sport ၊ အခု စပိန်ဒုတိယတန်းကလပ် Rayo Majadahonda မှာ အငှားနဲ့ သွားကစားနေသူပါ။ ဇီဒန်းရဲ့ အရှိန်အ၀ါကြီးမားလွန်းတာက အန်ဇိုအတွက် ဖိအားလို ဖြစ်စေပြီး အဲဒီဖိအားတွေကို တွန်းလှန်နိုင်တဲ့တစ်နေ့ကျရင်တော့ ဘောလုံးဇာတ်ခုံပေါ်မှာ ၀င့်ကြွားလာမယ့် ကစားသမားလို့ပဲ ဆိုရမယ်။
ဒီနေ့ခေတ် ဘောလုံးလောကမှာ ကျင်လည်နေကြတဲ့ ဂန္ထ၀င်တွေရဲ့ တခြားမျိုးဆက်သစ် ကစားသမားတွေလည်း ရှိနေဆဲပါ။ သူတို့တွေထဲမှာ ဘယ်သူတွေက ဖခင်ရဲ့ခြေရာကို လိုက်နင်းနိုင်မလဲ၊ ဘယ်သူတွေက ဖခင်ထက် ကျော်ကြားမယ့်သူတွေ ဖြစ်လာမလဲဆိုတာ စောင့်ကြည့်လိုက်ရအောင်လား . .
Photo:Sportyou,De Telegraaf,The Sun
အဖခွေ့ရောကို လိုကျနငျးကွမယျ့ ဘောလုံးလောကရဲ့ မြိုးဆကျသဈလေးမြား
ဘောလုံးလောကမှာ အဖရေော၊ သားရော အောငျမွငျမှု ရယူနိုငျတဲ့သူတှကေ ခပျရှားရှား။ အဖကေ ဂန်ထဝငျအမညျပေါကျပမေယျ့ သားက မထငျမရှားဘဝနဲ့ အဆုံးသတျခဲ့ရတာမြိုး။ ဥပမာ နယျသာနျလနျ ဂန်ထဝငျ ယိုဟနျခရိုကျဖျ Johan Cruyff ဆိုရငျ ဘောလုံးလောကမှာ မသိသူ မရှိသလောကျပဲ။ ဒါပမေဲ့ သူ့ရဲ့သားဖွဈတဲ့ ယျောဒီခရိုကျဖျ Jordi Cruyff ကတော့ လူသိနညျးခဲ့တယျ။ အဖရေော သားရော အောငျမွငျခဲ့တာဆိုလို့ မာဒလျဒီနီ Maldini တို့ သားအဖ၊ ရှမိုကျကယျ Schmeichel တို့ သားအဖတို့ လောကျသာရှိပွီး သူတို့လောကျ အောငျမွငျမှုမရှိပမေယျ့ ထိုကျသငျ့တဲ့နရောတဈခုရခဲ့တာက ဘလငျး Blind သားအဖ ၊ ရကျနကျပျ Redknapp တို့ သားအဖတို့ပါပဲ။
ပွီးခဲ့တဲ့ရကျပိုငျးတုနျးက ပျေါတူဂီနာမညျကြျော ကစားသမား စီရျောနယျလျဒို Cristiano Ronaldo ရဲ့ သားဖွဈသူ စီရျောနယျလျဒိုဂြူနီယာဟာ ဂြူဗငျတပျဈ ယူ-၉အသငျးနဲ့ ပူးပေါငျးခဲ့ပွီး သူဟာ စီရျောနယျလျဒိုရဲ့ မြှျောလငျ့ခကျြ အနာဂတျပါပဲ။ အခုဆိုရငျ ဂန်ထဝငျတှရေဲ့ မြိုးဆကျသဈတှကေ ဘောလုံးလောကမှာ နရောယူလာကွပွီ။ သူတို့တှကေရော သူတို့ဖခငျရဲ့ ခွရောကို လိုကျနငျးနိုငျကွမှာလား။ ဒါကွောငျ့ အဖခွေ့ရောကို လိုကျနငျးကွမယျ့ ဘောလုံးလောကရဲ့ မြိုးဆကျသဈလေးတှကေို ပရိသတျတှေ ဗဟုသတရအောငျ ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ . . .
တီမိုသီဝီယာ Timothy Weah
လိုငျဘေးရီးယား ဂန်ထဝငျကစားသမားကွီး ဂြော့ချြဝီယာ George Weah က ၁၉၉၀ ကြျော ကာလတှမှော ပရိသတျတှရေဲ့ အသညျးနှလုံးဖွဈခဲ့သူ။ အခု လိုငျဘေးရီးယား သမ်မတဖွဈနတေဲ့ ဂြော့ချြဝီယာရဲ့ သားဖွဈသူ တီမိုသီဝီယာကလညျး အဖခွေ့ရောနငျးနိုငျမယျ့ သားဖွဈအောငျ ကွိုးစားနပွေီ။ အဖဖွေဈသူရဲ့ နိုငျငံကို မခံယူဘဲ အမရေိကနျနိုငျငံသား ခံယူထားတဲ့ တီမိုသီဟာ သူ့ဖခငျဖွဈသူအတှကျ တဈခြိနျက အောငျမွငျဖွဈခဲ့တဲ့ PSG အသငျးမှာ ကစားနပွေီ။ အသကျ(၁၈)နှဈသာရှိသေးတဲ့ တီမိုသီက ဂြော့ချြဝီယာ ကိုယျပှားလို့ တငျစားရမှာဖွဈပွီး သူ့ဖခငျလိုပဲ ဘောလုံး Skill ကောငျးမှနျတဲ့သူပါ။ ဂြော့ချြဝီယာလို ကမ်ဘာ့အဆငျ့ကို ရောကျရှိဖို့ ခွလှေမျးပွငျနတေဲ့ တီမိုသီ သူ့ရဲ့အိပျမကျတှကေို အကောငျအထညျဖျောနိုငျမလားဆိုတာ အခြိနျက အဆုံးအဖွတျပေးသှားပါလိမျ့မယျ။
ဂကျြစတငျကလှိုကျဗတျ Justin Kluivert
ပတျထရကျကလှိုကျဗတျ Patrick Kluivert ဆိုတာက တဈခတျေတဈခါက ကမ်ဘာ့အကောငျးဆုံး တိုကျစဈမှူးစာရငျးဝငျ ကစားသမားတဈဦး။ ဥရောပဘောလုံးလောကကို စိုးမိုးထားနိုငျခဲ့သူ။ အခု သူ့ရဲ့သားဖွဈတဲ့ ဂကျြစတငျကလှိုကျဗတျကလညျး ဖခငျဖွဈသူရဲ့ အောငျမွငျမှုကို ပွနျလညျရယူဖို့အတှကျ ရှဆေ့ကျခြီတကျနပွေီ။ ပွီးခဲ့တဲ့ရာသီက အဂေကျြဈအသငျးနဲ့အတူ ခွစှေမျးပွခဲ့တဲ့ ဂကျြစတငျကို ရိုးမားအသငျးက တခွား ထိပျသီးအသငျးတှထေကျ လကျဦးမှုရယူပွီး ချေါယူခဲ့တယျ။ ဂကျြစတငျရဲ့ အသကျက အခုမှ (၁၉)နှဈသာရှိသေးလို့ သငျယူစရာတှေ၊ စိနျချေါမှုတှကေတော့ အမြားကွီးရှိနဆေဲပဲ။ ဒါပမေဲ့ ကလှိုကျဗတျရဲ့ သှေးတှေ စီးဆငျးနပွေီး အခွခေံပါရမီ ကောငျးတဲ့ ဂကျြစတငျ စိနျချေါမှုတှကေို အကောငျးဆုံးရငျဆိုငျနိုငျမယျလို့ ယုံကွညျတယျ။ တဈခြိနျကရြငျ ပကျထရဈကလှိုကျဗတျလို ကမ်ဘာ့အဆငျ့ ကစားသမား ဖွဈလာမယျ့သူဆိုတာ အသအေခြာပဲ။
အနျဇိုဇီဒနျး Enzo Zidane
တဈခြိနျက ဘောလုံးလောကမှာ “ဇီဇူး”ဆိုတဲ့ နာမညျနဲ့ ထငျရှားခဲ့သူ ပွငျသဈဂန်ထဝငျ ကစားသမားကွီး ဇီဒနျး Zidane ရဲ့ သားအကွီးဆုံးဖွဈပါတယျ။ သူ့ဖခငျဖွဈသူ အောငျမွငျမှုတှေ ရယူခဲ့တဲ့ ရီးယဲလျလူငယျအသငျးမှာ ကငျြလညျခဲ့ပွီး အဲဒီကာလတှတေုနျးက ဖခငျနဲ့အတူ လကျတှဲခဲ့ဖူးတယျ။ ဒါပမေဲ့ စီနီယာအသငျးမှာ ကမ်ဘာ့အဆငျ့ကစားသမားတှေ မြားနတောကွောငျ့ သူ့ ဘဝတကျလမျးအတှကျ ၂၀၁၇ ခုနှဈတုနျးက အလာဗတျဈကို ပွောငျးရှခေဲ့ပွီး အဲဒီကနေ ဆှဈဇာလနျကလပျ Lausanne-Sport ၊ အခု စပိနျဒုတိယတနျးကလပျ Rayo Majadahonda မှာ အငှားနဲ့ သှားကစားနသေူပါ။ ဇီဒနျးရဲ့ အရှိနျအဝါကွီးမားလှနျးတာက အနျဇိုအတှကျ ဖိအားလို ဖွဈစပွေီး အဲဒီဖိအားတှကေို တှနျးလှနျနိုငျတဲ့တဈနကေ့ရြငျတော့ ဘောလုံးဇာတျခုံပျေါမှာ ဝငျ့ကွှားလာမယျ့ ကစားသမားလို့ပဲ ဆိုရမယျ။
ဒီနခေ့တျေ ဘောလုံးလောကမှာ ကငျြလညျနကွေတဲ့ ဂန်ထဝငျတှရေဲ့ တခွားမြိုးဆကျသဈ ကစားသမားတှလေညျး ရှိနဆေဲပါ။ သူတို့တှထေဲမှာ ဘယျသူတှကေ ဖခငျရဲ့ခွရောကို လိုကျနငျးနိုငျမလဲ၊ ဘယျသူတှကေ ဖခငျထကျ ကြျောကွားမယျ့သူတှေ ဖွဈလာမလဲဆိုတာ စောငျ့ကွညျ့လိုကျရအောငျလား . .
by Ko Kyue . 1 hour ago